मोटो G6 र G6 प्ले: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र डिजाइन लीक Androidsis
ईडर फेरेनो | | Motorola, हाम्रो बारेमा
यो मोटोरोला लीक को हप्ता देखिन्छ। किनकि हामीले भर्खरै तपाईंलाई ब्रान्डको नयाँ फोनको बारेमा बताएका थियौं जुन मोटो जेड दायराको अंश बन्न गइरहेको थियो। अब, दुई नयाँ मोडलहरू देखा पर्‍यो, जसको विवरणहरू पहिले नै ज्ञात थियो। यो मोटो G6 र G6 प्ले को बारेमा छ। दुई नयाँ उपकरणहरू जुन ब्रान्डको क्याटलगमा छिट्टै समाहित हुनेछन्।
यी दुई फोनहरू बारे पहिले नै कुरा गरिसक्यो। अब हामीसँग पहिले नै पहिलो छविहरू र ती दुवैको विशेष विवरणहरू छन्। त्यसो भए यी मोटो G6 र G6 प्ले ले हाम्रो लागि पहिले नै केहि गोप्य राख्दछ. हामी यी फोनहरूबाट के आशा गर्न सक्छौं?
यो दायरा MWC २०१ at मा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यस्तो देखिन्छ कि मोटोरोलाले फोनहरूलाई कुनै ध्यान नदिनबाट रोक्नको लागि यस प्रस्तुतीकरणमा ढिलाइ गर्ने छनोट गर्‍यो। बार्सिलोनामा टेलिफोनी घटना पछि एक महिना पछि हामी दुबै मोडेलको बारेमा पहिलो सूचना जान्दछौं।
1 निर्दिष्टीकरण मोटो G6
2 निर्दिष्टीकरण मोटो G6 प्ले
निर्दिष्टीकरण मोटो G6
सबै भन्दा पहिले हामी यो मोडेल, मोटो G6 फेला पार्दछौं। यो एक फोन हो जुन स्क्रीन बिना कुनै फ्रेम बिना, बजार मा धेरै फैशनेबल। योसँग पूर्ण HD + रिजोलुसनको साथ 5,7 इन्च स्क्रीन छ र १ 18:। अनुपात। फोन भित्र स्न्यापड्रैगन 450। प्रोसेसर, or वा GB GB रमको साथ। आन्तरिक भण्डारणको 3२ वा GB4जीबी थपको साथ।
यो मोटो G6 पछाडि डबल क्यामेरा छ। यो १२ + MP MP क्यामेरा हो। भाग मा जबकि अगाडि एक १ MP MP क्यामेरा हाम्रो पर्खाइमा छ। हामी पहिले नै जान्न सक्छौं कि यो एक अपरेटिंग प्रणाली को रूप मा एन्ड्रोइड Oreo हुनेछ। थप रूपमा, यो एक हुनेछ 3.000००० mAh ब्याट्री। त्यसैले यो प्रयोगकर्ताहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिनु पर्छ।
मूल्यको बारेमा, यो खुलासा भएको छ कि मोटो जी को लागी २१० यूरोको मूल्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले यो यसको पूर्ववर्तीको समान मूल्य हुनेछ। यद्यपि यो सम्भव छ कि अन्तिम मूल्य केही महँगो छ। तर यो पनी पुष्टि भएको छैन।
निर्दिष्टीकरण मोटो G6 प्ले
दोस्रो स्थानमा हामी यो मोडेल फेला पार्दछौं, जुन पहिलोसँग एकदम मिल्दोजुल्दो छ। योसँग HD + रिजोलुसनको साथ 5,7 इन्च स्क्रीन छ। यो पनि अघिल्लो मोडेल जस्तै स्क्रीन छ, त्यसैले यो धेरै पातलो फ्रेम मा bets। भित्र हामी फेला पार्दछौं Snapdragon 430। र्याम र आन्तरिक भण्डारणको बारेमा अझै केही प्रकट गरिएको छैन। तर तिनीहरू पनी फोनमा उस्तै वा समान हुने आशा गरिन्छ।
फोटोग्राफिक सेक्सन को रूप मा, मोटो G6 प्ले पछाडि एकल क्यामेरा छ। यो एक हो १२ MP क्यामेरा। केहि उपकरणको फ्रन्ट क्यामेरा को बारे मा प्रकट गरिएको छैन। उसको जेठो भाईले जस्तै ऊ पनि बोक्नेछ Android Oreo मानक अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा। साथै, यस अवस्थामा तपाईंसँग ठूलो ब्याट्री हुनेछ। किनभने उसको ब्याट्री ,4.000००० एमएएच हुनेछ। निस्सन्देह तपाईलाई धेरै स्वायत्तता दिन्छ कि केहि।
मोटो जी Play प्लेको मूल्य १6युरो हुनेछ, उपकरणको स्पेसिफिकेशन्सलाई ध्यानमा राख्दै सबैभन्दा रोचकको मूल्य। यद्यपि सबै चीजले यो संकेत गर्दछ जस्तो कि यूरोपीय बजारमा यसको मूल्य केही बढी हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Motorola » मोटोरोला मोटो G6 र G6 प्ले पूरा चुहायो
एडर ... जस्तै »फ्रेम बिना» ... हामी उही फोटोहरू देख्छौं, तपाईं र म? 😉
लूकालाई जवाफ दिनुहोस्
Huawei P20 वा P20 Pro को निशान कसरी लुकाउने
MyFitnessPal अनुप्रयोग ह्याक गरिएको छ